प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तीन साताभित्रै - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तीन साताभित्रै
प्रकाशित मिति: १५ माघ २०७२, शुक्रबार
K.P. Oli Photo: THT file
माघ १५ । काठमाडौं, प्रधानमन्त्री केपी ओली तीन साताभित्रै भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । भारतबाट फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाने तयारी छ । संविधान संशोधनपछि नाकाबन्दी हट्न थालेको र केही दिनभित्र पूर्ण रूपमा नाका सहज हुने संकेत पाएपछि नेपाल पक्षले भारतीय पक्षलाई फेब्रुअरी दोस्रो वा तेस्रो साता प्रधानमन्त्री भ्रमणको समय प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारीका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आउँदो साता भारत जाने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले जनाए । मन्त्री पौडेलले भारतीय अधिकारीहरूसँग छलफल गरेपछि भ्रमणको मिति र छलफलका एजेन्डा औपचारिक रूपमा तय हुनेछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । नाकाबन्दी चर्किइरहेका बेला पनि ओली र मोदीबीच कुराकानी भएको थियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षीलाई नाका खुलाउन आग्रह गर्दै आपूर्ति सहज भएपछि मात्रै भ्रमणमा आउने वचन दिएका थिए ।
संविधानका विषयवस्तुलाई कारण देखाउँदै नाकाबन्दी गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतमै गर्न लागेका हुन् । द्विपक्षीय सम्बन्धमै समस्या उत्पन्न भएका बेला हुन लागेकाले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण नयाँ सहमतिमा भन्दा पनि सम्बन्ध सुधारमै केन्द्रित हुनेछ ।
‘अर्थमन्त्रीको तयारी भ्रमणपछि एजेन्डा र मितिको औपचारिक टुंगो लाग्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्ध समान्यीकरण गर्नेमा बढी केन्द्रित हुनेछ ।’ उनका अनुसार तत्काल गर्न सकिने केही आर्थिक विषय र यसअघि भएका सम्झौताअनुसार रोकिएका काम अघि बढाउने विषयमा पनि कुराकानी हुनेछ । मधेसी मोर्चाले राखेका मागमध्ये जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने र समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी माग संविधान संशोधनले समाधान गरिसकेको छ । बाँकी रहेका सीमांकनसम्बन्धी विवाद पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअगावै टुंग्याउने कोसिस सत्तारूढ दलहरू र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजकसमेत रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सीमांकन टुंगो लगाउने विषयमा सहमति खोज्न मधेसी र प्रमुख दलहरूबीच पहल गरिरहेका छन् ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पनि सीमांकनसम्बन्धी विवादसमेत टुंगो लगाउने गरी पहल अघि बढाउन दाहाललाई भेटेरै आग्रह गरिरहेका छन् । उपचारार्थ भारत गएका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर स्वदेश आएपछि शुक्रबारबाट मोर्चाको आन्तरिक र अन्य पार्टीहरूबीच पनि संवाद सुरु हुनेछ । सीमांकनको विषयमा सहमति नभए पनि नाका अवरोध गर्नेलगायत आन्दोलनलाई मधेसी मोर्चाले समेत खुकुलो बनाइसकेकाले भ्रमणको तयारी अघि बढेको हो ।
भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएको स्पष्ट सन्देश नआउँदासम्म चीनले समेत नेपालसँग औपचारिक रूपमा नयाँ सम्झौताहरू गर्न अनिच्छा देखाएपछि प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा हतारिएका हुन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएका बेला नेपालसँग कुनै सम्झौता गर्दा त्यसले भारतसँगको आफ्नो छुट्टै सम्बन्धमा चिसोपना नआओस् भन्नेमा चीन सचेत छ । त्यसैले उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको गत महिना भएको भ्रमणका बेला उच्चस्तरमै सम्झौता गर्ने भन्दै चीनसँग तत्काल कुनै सहमति भएन ।
भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएको सन्देश लिएर प्रधानमन्त्री ओली चीन जाने तयारी पनि सँगसँगै चलिरहेको छ । मार्च दोस्रो साताभित्र उनले चीनको पनि भ्रमण गरिसक्नेछन् । त्यसका लागि अर्थमन्त्री पौडेल भारतपछि चीन जाने तयारीमा छन् । चीनसँग भने ऐतिहासिक र दीर्घकालीन सम्झौताहरू गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ ।चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ आयात, व्यापार तथा पारवहन सन्धि र बिप्पा सम्झौता गर्ने तयारी छ ।
भारतले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भ्रमणको तिथिका लागि कूटनीतिक परामर्श जारी रहेको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत अक्टोबरमा दिएको निम्तोअनुसार नेपाली समकक्षी ओलीको भारत भ्रमण अपेक्षित रहेको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले बिहीबार नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जनाए । ‘कूटनीतिक च्यानलबाट तिथि निर्धारण गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
प्रवक्ता स्वरूपले वीरगन्ज नाकामा जारी नाका अवरोधबारे भने प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक सन्दर्भमा जानकारी लिन विदेश मन्त्रालयमा नेपाल डेस्कका प्रमुख अभय ठाकुर र सहायक मृदु पवनदास अहिले काठमाडौंमा छन् । उनीहरू ऊर्जा व्यापार स्थायी तथा संयुक्त समिति बैठकको सन्दर्भमा काठमाडौं गएका हुन् ।
यसैबीच दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले कांग्रेस आई अध्यक्ष सोनिया गान्धीसँग बुधबार साँझ भेटवार्ता गरेका छन् ।कान्तिपुर
काठमाडौं । सरकारले ०३७ मा धनकुटाको छिन्ताङमा हत्या गरिएका १६ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । प्रजातन्त्र […]
विदेश भ्रमणमा कर्मचारीको लर्को
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका दर्जनौं कर्मचारीले अध्ययन-अवलोकनका नाममा विभिन्न देश […]
ग्यास कि सिलिन्डर बम ? ९० प्रतिशत ग्यास उधोग मापदण्ड बाहिर !
वीरगन्ज । मुलुकमा रहेका ५५ ग्यास उद्योगमध्ये ९० प्रतिशतले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । ‘अनुगमनका क्रममा १० […]
महिलाले पनि अपराध गर्छन् र ? : बबिता बस्नेत
हिंसा र अपराधका धेरैजसो घटना पुरुषबाट हुने गरेका कारण अपराधी या हिंसा गर्ने मानिसका रूपमा प्राय: पुरुषकै […]